I-GvSIG, isebenza namafayela e-LIDAR - i-Geofumed
I-GvSIG, isebenza namafayela e-LIDAR
Disemba, 2008 I-GvSIG
Isikhathi esithile manje, izinhlelo zokusebenza ezehlukene kwezobuchwepheshe zenziwe I-LiDAR (Ukukhanya Kokukhanya Nokulungiswa) okubandakanya ukukala okude komhlaba ngokusebenzisa uhlelo lwe laser. Ngokusho kolwazi olukhona ku-DIELMO, okwamanje Iphephile i-LiDAR ubuchwepheshe obunembe kakhulu kunazo zonke zokukhiqiza izinhlobo ze-digital landscape ne-1 noma i-2m yokuxazulula indawo yamapheshana amakhulu, enokulinganisa okungcono kwe-15cm nokuqaphela ukulinganisa kwangempela kwe-XYZ kumitha ngayinye yesigcawu.
GvSIG kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule yethulwa extension khulula ngokuthi gvSIG DielmoOpenLiDAR nesebenzisa ikhono lokuphatha bese ubuka amafayela e .the LIDAR futhi .bin ifomethi, njalo ngenhloso hhayi ukubulala izinsiza khompyutha futhi sibonise kokubili omningi (amakhulu gigabytes) idatha LiDAR eluhlaza (ifu futhi izindawo okungajwayelekile BIN format) agqagqene nezinye idatha kwendawo e gvSIG.
DielmoOpenLiDAR kukuvumela zisebenza symbology okuzenzakalelayo kuye ukuphakama, umfutho kanye isigaba kusuka uzimele ifihlekile. Ngemva kokufaka isandiso ungasetha ubukhulu iphuzu ngokuya Amaphikseli, ukuze babe kude akubone ibala futhi njengoba sisondela uyakubona inkulu.
Ngale ndlela Lapho ulayisha izendlalelo ezintsha, ukwandiswa okudingekayo kwamafayela e-LIDAR kungenziwa kusebenze.
Ukuhlukaniswa ngokusho kokuphakama:
Lapha lokhu kusebenza kuboniswa, bona ukuthi umuthi ungahlukaniswa kanjani nokuphakama, kusukela ekwakhiweni kwendawo yemvelo ngokusho kwezakhiwo ezilungiselelwe ukufanekisa.
Ukuhlukaniswa ngokusho kokuqina
Umbono ofanayo uboniswa egrafu, kodwa uhlukaniswe ngamandla ngokuvumelana nemingcele echazwe umsebenzisi.
Lolu hlelo lokusebenza lakhiwa ngu-DIELMO, kusuka ekhasini layo ungalanda izandiso zezinhlelo zokusebenza ezihlukene, incwadi yomsebenzisi kanye nekhodi yomthombo.
Isinyathelo Ngithatha ukwenza le nkampani ukukhuthazwa anikeza izinkonzo ngaphezu imininingwane yayo emihle kakhulu LIDAR ubuchwepheshe, izixhumanisi ezithile intanethi kanye nemikhiqizo khulula.
Amamodeli womhlaba we-Digital I-cartography ye-Digital
Ukucacisa okuphezulu MDT
I-MDT yezezomnotho (i-5m)
Izakhiwo ze-MDT + (5m)
I-MDT yezezomnotho (i-10m)
I-MDT yezezomnotho (i-25m)
I-MDT yamahhala (90m)
I-MDT yamahhala (1000m)
I-MDT kusuka ekudwebeni kwayo
Isikali 1: 25.000
Isikali 1: 200.000
Isikali 1: 1.000.000
Isikali 1: 2.000.000
Isikali 1: 50.000
I-Amamephu ku-Freehand + TIF ifomethi
Thumela Previous«Langaphambilini Mayelana nezingozi
Post Next Ukuhambisa i-gvSIG nokubambisanaOlandelayo "
Izimpendulo ze-4 kuya ku- "GvSIG, esebenza namafayela e-LIDAR"
njengoba isigaba sisho, "ngokusho okushiwo ikhasi le-DIELMO," uma uthanda ungafunda umthombo wokuqala ochaze kakhulu.
Mhlawumbe ngolunye usuku sizinikezela ukuthunyelwa kokusebenza kwalokhu
... phezulu! i-permalink izongikhumbuza ngalokhu ezinye izinsuku zami
UGerardo Paz uthi:
Ngangifuna ukukubuza noma ngikucele ukuba uchaze - uma kungacasuli - yiliphi leli gama elibhekisela kulo:
«... nokwenza isilinganiso se-XYZ sangempela ngemitha ngayinye yesikwele.»
Ngiyabonga kakhulu ..
Izithombe ze-LIDAR? 😕
Ngacabanga ukuthi i-LIDAR ibamba kuphela amaphuzu 🙄